Wararka - [Sirta ereyada eyga] waxay ku dhex socdaan adduunka gudaha eeyaha ay leeyihiin milkiilayaashu
[Sirta ereyada eyga] waxay ku dhex socdaan adduunka gudaha eeyaha ay leeyihiin milkiilayaashu
Dad badan ayaa sheegaya in eey qurux badan uu la mid yahay ilmo qalbi hodan ah laakiin aan hadlin. Xaqiiqdii, eeyga indhihiisa aan waxba galabsan iyo muujinta xiisaha leh ma ahan sida fudud oo quruxsan sida ilmo? Si kastaba ha noqotee, haddii aad ula dhaqanto eeyga sida cunugga, waad khaldami lahayd. Waad ogtahay, nuxurkeedu wali waa xayawaan si kasta oo eey u qurux badan tahay. Suurtagal maaha in la fahmo dhammaan ujeedooyinka milkiilaha.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad fahamto eeyga oo aad si fiican u koriso, waa inaad ku bilowdaa dabeecadda jirka eeyga hodanka ah. waxaan u fiirsan karnaa oo soo koobi karnaa si taxaddar leh xilliyada nabadda. dabcan, barashada "erayada eyga" waa muhiim sidoo kale. Ha kuu aaminto inaad si fiican u fuliso tilmaamahaaga. Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah luqadaha waxqabadka ee caadiga ah eeyaha Si sax ah ma u fahmi kartaa?
“Eyga erayadiisii” ugu horreeyay —— Soo dhawow
Markaad guriga tagto ama aad subaxa hore soo toosto, eeyga ayaa kala bixin doona oo ku salaami doona. Ogsoonow in aysan ka soo kicin hurdada ee ay ku salaamayso. Dogs inta badan wey salaamaan oo waxay u muujiyaan xamaasad ay is leeyihiin, ee ma ahan shisheeyaha.
Midka labaad “erayada eyga” —— Waxaan ahay xishood
Eeyo badan ayaa ka xishooda shisheeyaha hortooda. Waxaa jira dhacdooyin muuqda oo ficillo ah oo muujinaya xishoodkooda .Tusaale ahaan, waxay bixinayaan calaamado xishood leh markay dhegaha madaxa ka laabanayso madaxyadoodana dib loogu laabanaayo dhulka si ay isu yareeyaan ama u dhuuntaan. Waxay umuuqataa inay leedahay dareen raaxo la’aan ah.
Haddii aad rabto inaad salaamto eey xishood leh ama neerfaya, sida saxda ah waa inaad dhinac u foorarsato oo aad dhabarkaaga toosnaato si ay kuugu imaan karto inay ku uriso. Waad kala bixin kartaa gacantaada ka dibna si tartiib ah ayaad u furi kartaa. Gacmahaaga kusii hay si eygu kuu urin karo meel fog. Markay tixgelinayaan arrinta ah in taabashada eeyga madaxiisu ay khatar tahay, qof walbaa wuxuu si fiican u taabanayaa madaxa eeyga si taxaddar leh.
Midka saddexaad “ereyga eyga” —— Waxaan rabaa inaan kula ciyaaro
Markuu eeygu doonayo inuu kula ciyaaro, wuxuu muujinayaa casuumaad milkiilaha, isagoo rajeynaya inaad la ciyaari karto. Tani waa waddo wanaagsan oo milkiilaha iyo eeyga ay si wanaagsan isugu fahmi karaan. Tani sidoo kale waa hab wanaagsan oo lagu dhiirrigeliyo eeyaha inay muujiyaan dhaqankooda firfircoon. Waqtigaan, eeyaha dabada oo lulaya waxay ka dhigi doontaa luuqadiisa jir dabacsan. Mulkiiluhu iskama indha tiri karo dhaqanka xayawaanka, taas oo saameyn xun ku yeelan karta caafimaadka maskaxda eeyga. Sidaa darteed, xusuusnow inaad la ciyaarto eyga xaaladdan.
Soo baxa “Eyga erayadiisa” —— I daa aniga
Marka eeyga jidhkiisu adag yahay oo dabadiisu ay kor u taagayso hawada sida calanka oo kale oo madaxiisa iyo qoortiisu ay dib ugu tiirsanayaan meel sare, waxay noqonaysaa mid feejigan oo shaki geliya. Waqtigaan, waxay muujineysaa, "Waxaan ahay dhab. Ha iga hor imaanin ”. Ilbidhiqsiga xiga ee ficilkan waxay u egtahay inuu dhowaan dagaal dhici doono. Haddii eeygu si dhab ah u dagaallamo, xarigga ku soo daa waqtiga. Adeegso sacab iyo qaylo dheer si aad u jeediso dareenka eeyga, ama ku buufi urka jirka eyga si aad uga dhigto labada eey si ku meel gaar ah inay u kala baxaan oo ay is dejiyaan.
Midka shanaad “erayada eyga” —— aan noqono saaxiibo
Salaanta saaxiibtinimada leh eeyaha waxaa ka mid ah nasashada iyo gacmaha oo lulaya xubnihiisa, eeyahana midba midka kale ayuu u wareegayaa si goobaaban. Jidhkoodu wuu laaban yahay oo dabogooduna way ruxmanayaan. U fiirso calaamadaha xishoodka ama qallafsanaanta markaad salaanto eyga. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo masaafada nabdoon ee udhaxeysa laba eey, gaar ahaan marka la kulmayo markii ugu horeysay. Ujeeddada ayaa ah in la hubiyo inay haystaan ​​meel ku filan oo looga hortago inay dagaallamaan.
Tan lixaad “eeyga erayadiisa” —— Waan argagaxsanahay
Marka eygu culeys ama walwal qabo, wuxuu raadin doonaa raaxo. Rabitaanka cuntada oo yaraada, afka iyo sanka oo leefleefta iyo timaha oo aad u bata ayaa dhammaantood ah calaamadaha walaaca ama walbahaarka. Shuban, dabo la jeexjeexay, oo lagu duuduubay dhegaha diyaaradda iyo taaha ayaa sidoo kale ah shuruudo milkiilaha looga baahan yahay inuu ka feejignaado.
Haddii eeygaagu had iyo jeer walaacsan yahay, dareemayo ama ay adag tahay inuu keli ahaado, waad isku dayi kartaa:
1. Waxaa kugula taliyay La-Taliyaha Dabeecadda Animal Tianxiahui: Sariirta eyga godka
U diyaari sariirta eyda u eg godka. Godku wuxuu ka furan yahay hal dhinac wuxuuna ku wareegsan yahay saddex dhinac, sida godkii asalka ahaa. Waxay ku siin kartaa eyga dareen amni oo gaar ah. Tababbarka saxda ah, u sheeg eeyga inuu sariirtiisu tahay buulkiisa iyo meesha ugu ammaansan isaga. Mar haduu dareemo cabsi iyo walwal, dooqa koowaad waa inuu dib ugu laabto sariirta!
2. Waxaa kugula taliyay La-Taliyaha Dabeecadda Animal Tianxiahui: Laf laf ey ah oo is-dhexgal ah
U diyaari eeyo badan oo is dhexgal ah eeyaha. Markaad baxaysid, wax u samee, sida laf laf ey ah oo is-dhexgal ah, si aad si buuxda u soo jiidato indhaheeda oo eyga mashquul iyo xiiso u yeesho inta jimicsigu socdo. Ka dib markaad dhaqaajiso habka isdhexgalka, lafahan lafta ah ayaa la falgali doona eeygaaga. Waxay ceyrsan doontaa eeygaaga oo dhaqsuu u carari doonaa marka eygaagu eryanayo. aad u xiiso badan!
3. Waxaa kugula taliyay La-Taliyaha Dabeecadda Animal Tianxiahui: Flying Disc PetI Toyractive Toy
Hubso in eeygaagu leeyahay jimicsi kugu filan. Wajiga eyga firfircoonida leh, milkiilaha wuxuu u baahan yahay inuu u ogolaado eeyga inuu sii daayo tamar saaid ah, haddii kale waxay soo saari kartaa dabeecad halaag ah. Haddii mulkiiluhu uusan mashquul ahayn, waxaa ugu wanaagsan in eeyga la baxo ka hor inta uusan subaxa bixin. Fadlan soo qaado qalabka tababarka, sida jajabyada, markaad socoto. Waxay hubisaa in eeyga uu wanaajiyo isdhexgalka milkiilaha inta uu ciyaarayo.
Sii eyga duugis habboon. Marka eygu kacsan yahay, muruqyada jidhka, gaar ahaan muruqyada dambe, way cidhiidhi noqonayaan. Sidaa darteed, milkiiluhu wuxuu si tartiib ah u duugi karaa lugaha hore eeyga, dhabarka iyo qaybta kore ee qoorta. Si tartiib ah u xoq, riix, iwm waxay yareyn kartaa xiisadda eyga.
Dareenka amni ee milkiilaha siiyay. Waxaa la sheegay in eeyadu dareemi karaan shucuurta milkiilayaashooda. Marka eydu dareemaan walwal iyo walwal, waa inaan noqono caawiyaal wanaagsan si aan u dareemo amaan iyo nasasho, lagana fogaado dhibaatooyinka shucuureed ee sii xumaanaya Mulkiiluhu ma dareemi karo walwal, cabsi ama walaac badan. Xaqiiq ahaan, eeyaha xishoodka leh waxay u baahan yihiin ilaalin dheeri ah oo deegaanka ah .Way ka fogaan kartaa inay baqaan.
Fahamka afka eeyaha waxay u baahan tahay sahamin muddo dheer ah iyo soo koobid. Ha ku xukumin shucuurta eeyga hal ama hal dhaqdhaqaaq, laakiin isku dar dhaqdhaqaaqa, muujinta, indhaha iyo dhawaaqyada qeybaha kala duwan ee eyga si aad u soo gabagabeeyso. Sidan oo kale, waxaad dhisi doontaa hab gaar ah oo wax ku ool ah oo lagula xiriiro eeyga si loo fahmo loona kalsoonaado midba midka kale, taas oo ku habboon shaqada aasaasiga ah ee tababarka eyga.
Waqtiga boostada: Aug-20-2020